Mvura inokachidza gasi → Midziyo yemvura isina humbowo
Kuwedzera mumakambani mahofisi, mahofisiuye kunyange mu dzimba zvakavanzika zvinowoneka mvura inopararira. Mazuva ano mudziyo we gassing mvura inopa inotonhorera uye inotonhorera inotonhorera, inopisa uye tembiricha yemukamuri yekumwa mvura, zvinoenderana nesarudzo yemidziyo yakasarudzwa uye nezvinodiwa nevanhu vanoishandisa.
Dhawunirodha bhuku racho >>
Carbonated mvura yekupa Iyo yakakwana zvese munzvimbo dzakashama, nzvimbo dzakavharwa dzekushandira pamwe nemasangano eruzhinji, pamwe nemudzimba dzevanhu, kureva chero kupi uko kwakakwirira mvura yakakosha.
Usasefa mvura. Chenesa iye! Isu tinopa echimurenga tekinoroji ye UV LED mwenje yemvura disinfection kubva kuAcuva. Isu tiri voga vekuparadzira muEurope!
Vagadziri vemvura yekunwa vanopa pamusika vanoedza kuwana chikamu chepamusoro chemhando uye kuravira kwemvura yakagadzirirwa kuburikidza nekushandisa kwehunyanzvi hwekugadzirisa mhinduro. Panguva imwecheteyo, ivo zvakare vanotarisira dhizaini yemazuva ano yechigadzirwa icho chinokwana mune chero nzvimbo. Imwe yekuwedzera mukana wezvigadzirwa zvakaratidzwa pano mvura carbonated zvakare kuita kwavo kwakanyanya kushanda.
Zvichienderana nezvamunoda, tinogona kusarudza kubva kune akati wandei epamusoro-kirasi zvishandiso zvekugadzirira kwemvura inopenya:
Hi-Kirasi-silinda-isina mvura disenser
Hi-Kirasi-silinda-isina mvura disenser yakagadzirirwa uye yakagadzirirwa kushandiswa mumhando dzakasiyana dzemukati, uko isiri chete chishandiso chinoshanda, asi zvakare inoshongedza nzvimbo iyo yainoiswa.
Mhinduro dzemazuva ano dzetekinoroji dzinoshandiswa mukugadzirwa uye kugadzirwa kweichi chishandiso uye kushandiswa kwezvinhu zvemhando yepamusoro zvekugadzira kwayo kunovimbisa kuvimbika kwekushambadzira nemugadziri wayo.
Hi-Kirasi yemvura inodzika inogona kugadzirira inosvika makumi mashanu nemashanu emarita emvura inotonhora uye inopenya paawa uye inosvika gumi nematanhatu paawa yemvura inopisa.
Muchina unopa mhando ina dzemvura inonaka.
Mvura yakagadzirirwa inogona kutonhora, kupisa kana tembiricha yemukamuri, inogona zvakare kuvezwa kabhoni.
Inonaka uye ine hutano mvura yakagadzirirwa neHi-Class dispenser inogona kudururwa yakanangana mumidziyo yenzvimbo dzakasiyana siyana. Izvi zvinogoneka nekuda kwekuiswa kwesipout inogadziriswa mumushini.
Iko kusanganisa kwegirazi dema regirazi pamberi pechigadzirwa nesimbi isina chinhu uye yakanyanyisa yekushongedza control panel inokutendera iwe kuti ugadzire dhizaini yazvino inoenderana nechero mukati, panguva imwe chete ichienda pamwe neakakwira anoshanda ehunhu hwechigadzirwa.
Pro-Stream cylinder-isina mvura yekupa
Pro-Stream cylinder-isina mvura yekupa inokutendera kuti ugadzirire inotonhorera, inopisa uye inopenya mvura mune yakati siyanei nguva, inozivikanwa neakanakisa kuravira.
Iyo Pro-Stream yekuparadzira inoratidzirwa neazvino dhizaini uye yakakwira mashandiro, uye nekutenda kune yakashongedzwa yakadzivirirwa ikholamu uye yekubata control panel, iyo inogovera iri nyore kwazvo kushandisa. Mushandisi anonyatso kuziviswa nezve mamiriro ekushandisa kwechigadzirwa nekuda kwemeseji dzakaratidzwa.
Iyo Pro-Stream dispenser inogona kushanda neaboiler, inotonhorera kana gasi system. Kutenda kune iyo sisitimu inodzora mashandiro ekushandisa echishandiso, zvinokwanisika kudzora otomatiki kushandiswa kwesimba.
Mvura inogona kudziirwa kusvika 98 ° C panouye kugona kwechigadzirwa kunokubvumira kuti uzadze makapu anosvika mazana maviri nemakumi maviri neshanu anokwana mazana maviri nemakumi mashanu emamiriyoni paawa. Kubatsira kweichi chinopa ndiko kugona kwekukurumidza kugadzirira zvinwiwa zvese zvinopisa.
Sarudzo yekugadzirira inotonhorera uye inopenya mvura inopa inosvika gumi nemashanu litita emvura paawa.
J-Kirasi mvura inodzosera mvura
J-Kirasi mvura inodzosera mvura inoratidzirwa neiyo yepamusoro mhando yakawanikwa nekuda kwekushandisa tekinoroji yazvino, iyo inoita kuti kuvimbika kushande uye kushandiswa kwakasiyana-siyana kwechigadzirwa.
Aya ekuparadzira anoshandiswa nechido mumahofisi, mabhawa, maresitorendipamwe nedzimba dzevanhu. Izvo zvinogadzirwa mumhando mbiri:
- TOP musiyano - chishandiso chekumisikidza pamusoro petafura
- sarudzo IN - kuiswa pasi petafura yepamusoro.
Mushini unogadzirira marudzi mana emvura:
kupisa nekushisa kusvika 98 ° C
Iyo J-Kirasi inogovera ine maviri masimba: 30 litita emvura yakagadzirirwa paawa uye 45 litita emvura paawa.
Iyo Niagara Pamusoro silinda-isina mvura disenser
Iyo Niagara Top cylinder-isina mvura yekupa chinhu chakasimba kwazvo, chinoshanda uye chakavimbika chinogadzirira mvura nyowani uye inonaka, inosangana nemhando yepamusoro, iyo inogona kushandiswa zvinobudirira mumahofisi, nzvimbo dzebasa nemahofisi.
Iyo Niagara yepamusoro Distributor ichakubatsira kugadzirisa chero zvinhu zvine chekuita nezve zvine chekuita nekutakura mvura kuendesa uye kuchengetedza, uye isina chinhu bhodhoro repurasitiki. Nekuda kwechinhu ichi chehunyanzvi, zvinokwanisika kupa vashandi uye vatengi nemvura nyowani uye ine hutano, pasina kunetsa kunogara kuripo kwemabhodhoro emvura.
Mugadziri uyu unoitirwa kuti ushandiswe munzvimbo dzeruzhinji, uchiita basa risina dambudziko kana uchigovera mvura yakawanda inopenya uye ichiripo, zvichikubvumidza kukurumidza kuzadza mhando dzese dzemidziyo uye kudzikisa mutengo wekupa nekuchengetedza mvura yekunwa.
-TOP - pakaunda
-IN - pasi-pakaunda
DZIMAI TOWER silinda-isina mvura disenser
Iyo DRINK TOWER cylinder-isina mvura yekupa ndiyo chishandiso chakakwana chekugadzirira huwandu hwakawanda hwemvura inotonhorera uye inotapira, zvese zvichiri kupenya. Ichi chishandiso chakanakira chikamu chekudyira, mumabhawa, mumaresitorendi nemahotera, i.e. chero pazvinofanirwa kugadzirira huwandu hwakawanda hwakanakisa emvura yekunwa munguva pfupi.
Ichi chishandiso chinogona kusanganiswa nechero yepasi-pekutengesa system.
Mugadziri weDIRIN TOWER anogadzirwa nemhando yepamusoro yezvinhu, ichiita basa refu, risina dambudziko. Dhizaini yayo inobvumira kuunganidzwa kwehutsanana hwemvura yekunwa yakagadzirirwa.
Iyo cylinder-isina H2O mvura yekupa mvura yangu chishandiso chemazuvano chakagadzirirwa kugadzirirwa kwemvura inotonhorera uye inotonhorera, inopisa uye ine kabhoni, pamwe nemvura tembiricha yemukati. Yakakwana macompact, dhizaini yemazuva ano uye intuitive oparesheni ndezvakanakira mudziyo uyu, unowanikwa mushanduro mbiri:
- pamusoro petafura - TOP
- pasi-kaunda nespout - IN.
5 / 5 ( 1 vhoti )
9 lsilinda-isina mvura disenseryekumba mvura gassing chishandisomudzimba mvura disensermudziyo wemvura5l yekupa mvuraallegro yekupa mvuramutengo wekupa mvuramvura inogovera vanadisenser yemvura inopenyamvura disenser Warsawinopisa mvura disensermudziyo wemvura5l mvura inowanikaAllegro inopa mvurabhodhoro risina mvura remvuramutero wemvurazvakasikwa Chipo mvura disenserzvakasikwa chipo chemvura inopa mutengomvura inogovera vanamvura inogovera hofisimudzimba mvura disensermuto wemvura dhizaundikunwa mvura disensereden mvura inowanikidzaeden yemvura yekuparadzira bhukukabhoni yakagadziriswa mvura disenserinopenya mvura yekupa mutengokabhoni yakadhirowa mvura inogovera imbamvura inogovera mashandiro ayomudziyo wemvura Krakowmineral mvura disenseroasis mvura inopaolx mvura yekupakunwa mvura disenserdispenser yemvura muchirungudutu remvura rekupamvura inowanika mufirijimvura inowanika mufiriji kuti inoshanda seimvura disenser Warsawmvura yekuparadzira wrocławzviyero zvekupa mvurarendi yemvura yekuwachisamvura yekuburitsa mvura mutengoco2 dhayeti yemvuratap mvura disenserdisenser yemvura nefirijimvura inopa kubva kunetiwekimvura inodzimavanopa mvura kumakambanizvicherwa vanopa mvuravanopa mvura yematsimeImwe mvura inodzosera mvurafiriji mvura disenserpombi yemvura 5 gallon bottle dispenser 18mudziyo wekusefa uye gassing mvuramudziyo we gassing mvuramudziyo we gassing mvura allegromvura gasification chishandiso ceneo
Ona dzimwe nhau: